Panguin: Hụ mmetụta nke Mgbanwe Algọridim Google | Martech Zone
Panguin: Hụ mmetụta nke Mgbanwe Algọridim Google
Tọzdee, Nọvemba 22, 2012 Wednesday, November 21, 2012 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ, ngwaọrụ ndị dị mfe bụ ihe kachasị baa uru. Oge ụfọdụ, ndị ahịa anyị na-eche ma mgbanwe algorithm nke Google na-aga n'ihu na-emetụta ha. Anyị anaghị echegbu onwe anyị banyere ha dịka anyị siri na n'oge gara aga - n'eziokwu niile algọridim ahụ ka mma nke ọma na anyị na-elekwasị anya karịa na ide ihe kachasị mma ma hụ na ọ dị mfe ịkekọrịta.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebe taabụ nso na algọridim ahụ, ọ ga-adị mma ka ị kpuchie mmelite algorithm ahụ na nyocha ọchụchọ gị iji hụ ma enwere mmetụta ọ bụla? Nke ahụ bụ ihe Barracuda na-enye ngwa ọrụ ya akpọrọ Asụsụ Panguin. Nbanye na ngwá ọrụ, họrọ nchịkọta Akaụntụ nke ịchọrọ inyocha, ngwa ọrụ ahụ na-ekpuchi okporo ụzọ ọchụchọ gị na ụbọchị Google Panda, Penguin na mgbanwe ọ bụla dị egwu algorithm.
Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị were mikpuo na ntọhapụ nke Penguin Exact Match. Anyị na-alụ ọgụ maka ngalaba ndị ọzọ na-ezuru ọdịnaya anyị yana hụ na ngalaba anyị na-ebigharị. Anyị chọrọ ijide n'aka na anyị enweghị ngalaba ọ bụla ebe ahụ na nnukwu ọnụọgụ nke ọdịnaya na-abịa site n'aka anyị.
Erin na ndị otu ya SEO ọkachamara na Atụmatụ saịtị tụgharịrị m na ngwá ọrụ a n'oge ngosi anyị kwa izu, Edge nke Web Radio - anyi bu onye nkwado nke ihe ngosi a.
Tags: algọridimalgorithm nke googlemgbanwe google algorithmpanda googlegoogle penguuinpandapenguin
Omume zụ Ahịa Mobile Na World
Ọrụ nlekota oru na nyocha nke ndi mmadu